I-CORBITION ibambe iqhaza kwi-8th China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair
INKAMPANI yobumbano yanikezwa isihloko sebhizinisi elikhokha intela eShanghai. Lokhu ukuqinisekiswa kobuchwepheshe be-CORBITION, kepha futhi nokubuyela kwabo bonke abasebenzi be-CORBITION emphakathini. Esikhathini esedlule se-8 China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, imikhiqizo yethu ibonwe ngekhwalithi yomoya wamaShayina nobungcweti wenhlolokhono nemibiko. Kulo mbukiso, i-CORBITION ikhombise i-36-bit ne-48-bit nucleic acid extractors, kanye nochungechunge lwezinto ezisetshenziswayo zokwelashwa ezifana nekholomu ye-nucleic acid yokuhlanzwa, ipuleti lomgodi ojulile, ipuleti le-PCR, umkhono webha kazibuthe, njll. ikakhulukazi ithuthukisa amathuluzi amabili we-nucleic acid wokukhipha, anezici zokusebenza okulula, ukuthuthwa okulula, indawo encane yokusebenza, njll., futhi wethula nochungechunge lwezinyathelo zokukhetha Ngalo mbukiso, hhayi kuphela ukukhombisa imikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme, kepha futhi nokukhuthaza isithombe senkampani yethu, isisize inkampani YOKULUNGISELELA ukuthuthuka kwesikhathi eside. Le nkampani yombukiso yokwandisa umbono, ukucabanga okuvulekile, ukufunda okuthuthukile, ukuhwebelana kanye nokubambisana, uwusebenzise ngokugcwele lo mbukiso, ngokubamba iqhaza kwamakhasimende nabathengisi ukuxhumana, ukuxhumana, ukuxoxisana, ukuqhubekisela phambili ukubonakala kwenkampani nethonya, kepha futhi nokuqhubeka qonda izici zemikhiqizo yebhizinisi eliphambili, ukuze uthuthukise ukwakheka kwemikhiqizo yabo, udlale izinzuzo zabo. Ngalo mbukiso sizuze okuningi, sizoqhubeka nokusebenza kanzima, sazise abantu abaningi ngomkhiqizo wethu.
Ukulwa nobhubhane kungumsebenzi wawo wonke umuntu
Ngokwanda kwezindlela zokuvimbela nokulawula ubhubhane lwe-COVID-19 eChina, iKhomishini Yezempilo Kazwelonke iyalele ukuthi imizamo ejwayelekile yokuhlola i-nucleic acid kanye nobubanzi bokubona kufanele yenyuswe ngokuqhubekayo, futhi zonke izivivinyo kufanele futhi zizimisele ukuhlolwa kufanele zihlolwe. Ngokuqaliswa kokuqondiswa, sekusungulwe amalabhorethri obuchwepheshe e-PCR emadolobheni ahlukahlukene wokuvimbela nokulawulwa kwe-COVID-19 kusukela ngo-2020. Ngokufika kancane kancane kwemishini ye-PCR, izinkinga ezinjengokubuthakathaka kwamandla ezisebenzi zabanye emadolobheni ziye zadalulwa .
Umqondisi weLaboratory Department of Peking Union Medical College Hospital, wathi engxoxweni eyayizophela ekupheleni kuka-2020: “Kwezinye izifunda, imitshina ye-PCR kanye ne-nucleic acid extractors zikhona, ngisho namalabhorethri e-PCR asemisiwe. Nokho, isihluthulelo ukuqeqesha izisebenzi zobuchwepheshe zesayensi yamangqamuzana ezikwazi ukubhekana nalolu bhubhane. ” Ingabe okubalulekile.
Esikhathini esingengakanani esidlule, abanye abasebenzi baselebhu abasiza uXinjiang noHebei baphinde bathi, ngaphezu kokuqedela imisebenzi yokuhlola i-nucleic acid, ukufundisa abasebenzi basendaweni yokusebenza ngobuchule ukusebenzisa imishini ye-PCR nakho kuyingxenye yomsebenzi osekelayo. Ngakho-ke, ngokufika kwelabhorethri ye-PCR, ukusebenza okunekhono kwemishini ye-PCR kuyisiqinisekiso esiyisisekelo sokwandisa umthamo welabhorethri ye-PCR.
Njengohlobo oluphambili lokutholwa kwe-nucleic acid kubhadane lwe-COVID-19 eChina, insimbi ye-CHM065 real-time fluorescence quantitative PCR instrument of Corbition iye yaziwa futhi yathengwa ngamalabhorethri amaningi e-PCR. Futhi ngenxa yokusebenza kwayo okuhle kakhulu, ukusebenza okulula, okusebenziseka kalula nokusebenza okuphezulu okuvivinywe isikhathi, kanye nomsebenzi wayo we-inthanethi, akungabazeki ukuthi kukhethwe abasebenzi bokufundisa njengemodeli yokufundisa ye-PCR, kuzo zonke izingxenye ze izwe, ngisho nomhlaba wonke ukwenza umthwalo osindayo wokuqeqesha izindiza.